८ सय मात्रै तलब भएकी नीताले यस्ता शर्तमा अहिलेका भारतकै धनाड्य व्याक्ति मुकेश अम्बानीसंग विहे गरेकी थिइन्
एजेन्सी । भारतकै धनाड्य व्यक्तिको नाम सुन्नसाथ मुकेश अम्बानीको नाम पहिले आउछ। उनि एसियाका धनि व्यक्तिको सूचिमा पर्छन । मुकेश अम्बानीको जीनवशैली रहनसहन बारेमा सबैले चासो राख्ने गर्दछन् । मुकेशको सबै परिवार सबैको चर्चा आउने गर्दछ । साथै उनकी श्रीमती नीता अम्बानीको पनि उत्तिकै चर्चा चल्ने गर्दछ ।
धनि व्यक्तिहरुको हरेक कुराहरु चर्चामा आउने र जीवनशैली बारेमा बुझ्ने सबैको चासो हुने गर्दछ । मुकेश अम्बानी रिलायन्स कम्पनीसँगै आलिसान महल, कार, निजी विमान र सम्पत्तिका कारण चर्चामा छन् । तर कमलाई मात्र थाहा छ यी दुईको वैवाहिक जीवनको बारेमा । उनीहरुको कसरी भेट भयो ? विवाहको प्रस्ताव कसरी आयो ? साथै, विहेअघि नीता के गर्थिन् त ?
धीरु भाईको रोजाईमा नीता : भनिन्छ, जोडी भगवानले स्वर्गबाट नै बनाएर पठाएका हुन्छन् । नीता र मुकेशको जोडी पनि यस्तै छ । सामान्य परिवारमा जन्मिएकी नीतालाई धीरु भाईले बुहारी बनाउने प्रस्ताव गरेको प्रशंग निकै रोचक छ । रिलायन्स कम्पनीका संस्थापक धीरु भाई अम्बानी आफैले बिन्डला ग्रुपद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पहिलो पटक नीतालाई देखेका थिए । नीताका पिता उक्त कम्पनीमा कार्यरत थिए । कार्यक्रममा नीताको प्रस्तुतीले प्रभावित भएका अम्बानीले नीतालाई बुहारी बनाउने बारेमा सोचिसकेका थिए । र उनले कार्यक्रमको अन्तिममा नीताका पिताको नम्बर लिएर आफै उनीहरुलाई सम्पर्क गरेका थिए ।
धीरु भाईको प्रस्ताव नीतालाई लाग्यो मजाक : रिलायन्स कम्पनीका संस्थापकले आफूजस्तो सामान्य परिवारकी युवतीलाई विवाहको प्रस्ताव राख्दा सुरुमा नीतालाई मजाक जस्तै लागेको थियो तर धीरु भाईले नम्बरको माध्यमबाट नीताको परिवारमा विवाहको प्रस्तावको बारेमा सल्लाह गरे । घरमा कुराकानी भएपछि उनी अम्बानीको घर गइन् । उनी अम्बानीको घर पुग्दा मुकेश अम्बानीले ढोका खोले । बारम्बार पिताबाट नीताको बारेमा सुनेका मुकेशले पहिलो पटकमै उनलाई चिनें । केहिबेरको कुराकानीपछि उनीहरुको अर्को भेटघाट तय भयो ।
मुकेशसँग विवाह गर्नुअघि नीताका शर्त : पहिलो भेटघाटपछि नीता र मुकेशको भेटघाट बाक्लियो । एक अर्कालाई मन पराउन थाले । र, मुकेशले नीतासँग विवाहको प्रस्ताव राखे । तर, नीताले विवाह गर्नुअघि शर्त राखिन् । नीता विहेअघि एउटा सामान्य स्कुलमा बालबालिकालाई पढाउँथिन् । जहाँ उनको तवब मात्रै ८ सय थियो । र बिहेपछि पनि उनी उक्त कामलाई निरन्तरता दिन चाहान्थिन् किनकी उनलाई पढाउने सोख थियो । साथै, उनी आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिन चाहान्थिन् । उनले विहेपछि सबैभन्दा धनि घरकी बुहारी बनेपनि सामान्य जीवन जिउन पाउनुपर्ने र उनले गरिरहेको नोकरी नछोड्ने आफ्नो इच्छा रहेको बताइन् । उनको शर्तलाई मुकेश अम्बानीले सहर्ष स्वीकार गरे । अन्ततः उनीहरुको विवाह भयो । अहिले नीता पनि सफल व्यवसायीका रुपमा परिचित छिन् ।
पाइलटको गल्तीले कार्गो विमान दुर्घटना : १५ जनाको मृत्यु, १ जनाको जिवितै उद्दार (तस्बिर सहित)